Ny fanomezana lehibe indrindra
" Fa Izay mampitoetra anay mbaminareo ao amin’ i Kristy sady nanosotra antsika dia Andriamanitra, Izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny Fanahy ho santatra ato am-pontsika". 2 Kor.1:21,22 .
Rehefa nanome ny Fanahy Masina Andriamanitra dia hitany fa tsy afaka ny hanome mihoatra intsony Izy. Sady tsy hampiana no tsy hanalana io fanomezana io fa tena sahaza tokoa. Amin'ny alalany no ahazoana ny zavatra rehetra ilaina. Ny Fanahy Masina dia ny fanatrehan'Andriamanitra izay tena ilaintsika tokoa ka raha ankasitrahana dia hampipololotra fiderana szy fisaorana ary hiboiboika hitondra fiainana mandrakizay. Ny fanavaozana entin'ny Fanahy Masina dia ny fanekem-pahasoavana. Indrisy anefa fa vitsy loatra no mankasitraka io fanomezana lehibe io, izay tena lafo vidy tokoa kanefa omena maimaimpoana ho an’izay manaiky handray izany! Rehefa mifikitra amin'izany fitahiana izany ny finoana dia safononoka ny zava-tsoa ara-panahy mirotsaka. Matetika indrindra anefa no tsy ankasitrahana loatra io fitahiana io. Mila fahatakarana mivelatra kokoa isika mba hahazoana an-tsaina ny tombam-bidiny...
Endrey, fitiavana mahatalanjona sy fahambonian-toetra manao ahoana re izany e! Mampirisika ny mpino Azy i Jesôsy mba hangataka ny Fanahy Masina. Amin'ny fanehoany ny fitiavan'Andriamanitra toy ny ray amin'ny zanany no hitadiavany izay hananantsika finoana eo amin'ny fandraisana izany fanomezana izany. Ilay Ray ao an-danitra dia vonona kokoa hanome ny Fanahy Masina amin'ireo izay mangataka Aminy noho ny ray aman-dreny eto an-tany aza, izay maniry hanome zava-tsoa ho an'ny zanany.
Misy zava-dehibe mihoatra noho izany ve nampanantenaina antsika? Inona ihany koa no zavatra hafa ilaina mba hanaitra ny fanahy tsirairay, ka hahatonga antsika hangetaheta izany fanomezana lehibe izany? Tsy ho tonga fitalahoana fatratra mba hahazoana izany fitahiana lehibe izany ve ny fangatahantsika tsy nisy aina teo aloha?
Tsy ampy ny fangatahantsika ireo zava-tsoa efa nampanantenain'Andriamanitra. Raha manakatra ambonimbony kokoa isika ary hanantena misimisy kokoa, dia ho hita taratra eo amin'ny fangatahantsika ilay hery mamelona tonga amin'ny fanahy rehetra izay manantena fatratra ny hohenoina sy hovaliana. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny fangatahana toa tsy misy aina izay mampiseho fa tsy misy loatra ny azo antenaina. Iriny tokoa izay rehetra mino ràha hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin-kitsim-po sy fatokiana be.